Heart Museum: သေသောဝ်မှတည့် သြော်... ကောင်း၏။
သေသောဝ်မှတည့် သြော်... ကောင်း၏။
Posted by Heartmuseum at 9:19 PM
အဲဒီ့ Three Monkeys အကြောင်းလေးကို ထည့်ရေးထားတာ ကြိုက်တယ်. အဲဒီ့အကြောင်းလေးပါ နည်းနည်းလေးလောက် ဆွဲရေးပေးပါလား ဘရားသားရေ...
ရန်ကုန်ဘဆွေရေးတဲ့ဝထ္တူ မှာ ကဗျာ လေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်
ဗျ သေသော်မှသည်သြော်ကောင်းဧ။် တဲ့
Very Meaningful Poem.
အဲလိုတော့ဖြစ်နေတယ်... သေတော့မသေချင်သေးဘူး... ဟီး...
ဟား...ခံစားချက်တွေ ပေါက်ထွက်လာပါလား..။ မိုက်တယ်အစ်ကို :)
မောင်ဓားပြတိုက် က ဘာတွေစားချင်လို့ သတုန်းးး)
ဘယ်လိုတွေ ခံစားနေရသလဲဆိုတာ နားလည်တယ်
ခံစားချက်တွေတူနေတော့ ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးလေ ။
တကယ်ပါ မြန်မာပြည်သူတွေလည်း တရားမျှတမှု နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေနဲ့ တိုက်တန်ပါတယ်ဗျာ။ အဲဒါတွေ အမြန်ဆုံးရကြပါစေ။
မကောင်းပါဘူး.. သေရင် ၁ က ပြန်စနေရဦးမယ်..။
ဤလို ဆိုးရွားလှသော ဒုက္ခများကို
“မကြားရ၊မမြင်ရ၊မပြောမိ” သောသူ ဖြစ်ရပါလို ၏ပေါ့.
အဲ..ပြည့်စေ ဆိုပီး ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာကတော့...
မျက်နှာတပြင် လုံး “နှာခေါင်း” ပဲကျန်ပါတော့တယ်..:P
awww ba wa ba wa.. very good one. Hope to see more :)
တကယ်ကောင်းတဲ့ အကြံညဏ်ပါလာဟရို. :P
ကောင်းဝူးးလေဗျာ တေတွားပြီးရင်တော့ ဘာဆို ဘာမှတိရတော့ဘူးနော် ...:P
ကဗျာ အဖွဲ့နဲ့ ခေါင်းစဉ်ယူပုံလေး ဂွတ်တယ်အကိုပြတိုက်ကြီး...။
upset about something? ..
(Life is living, whether u like it or not.)
အရင်က ကဗျာတစ်ပုဒ်လည်း ဒီခေါင်းစဉ်ပဲဗျ။ အခုဟာကလည်း တမျိုးကောင်းတာပါပဲ။ တော်တော်လေး အဓိပ္ပာယ်ရှိတာပဲ။ အင်း... ဘာလိုလိုနဲ့ လူတွေအားလုံးမှာ ခံစားချက်တွေ ပြည့်နှက် ပြင်းထန်နေပါရောလား...။
အေးဆေးပေါ့ ကိုအညတရကြီးရ ... မသေပါဦးနဲ့
ဘာတဲ့ အဖိုးကြီးအို ခါးကုန်းကုန်း မသေပါနဲ့ဦးတဲ့ :P
အိုရ နာရ သေရအုံးမှာပါလား တစ်နေ့ကျရင်။
Just like Rambo said "live for nothing, die for something". Why don't they all just fight in stead of dying with starving? Or go and rob to goverment employee's house township by township and city by city.